Kpido: google chrome
Ịgụ Oge: 2 nkeji Mkpakọrịta ọ bụla nke achọrọ n’etiti atụmanya nwere ebumnuche ị zụrụ na ikike ndị ahịa gị ga - enyere ha aka ịgbanwe nwere ike belata ohere ịtụgharị. Nke ahụ gụnyere oge ịzaghachi, ọnụọgụ nke clic, ọtụtụ nha ihu, nọmba ụdị ihe… ihe niile. Ndị ọkachamara n’ahịa ahụ m maara na ha chọrọ ịbịa n’ihu atụmanya ahụ. Ha maara na ozugbo ha nwere ike ịgwa atụmanya ahụ okwu, mata
Ịgụ Oge: 3 nkeji Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere pọtụfoliyo nke saịtị ma ọ bụ ibe ịchọrọ ịkekọrịta n'ịntanetị, ọ ga-abụrịrị na ị gabigara ihe mgbu nke ịnwa ịdebe nseta ihuenyo nke saịtị ọ bụla. Otu n'ime ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ na-ewulite ihe ngwọta Intranet nwere ike ịnabata n'ime ụlọ ọrụ. Intranets na-enye aka maka ụlọ ọrụ iji kpọsaa akụkọ ụlọ ọrụ, kesaa ozi ahịa, nye
Ịgụ Oge: 3 nkeji Nkwupụta nke June 2020 nke Apple na IDFA ga-abụ njirimara nhọrọ maka ndị na-azụ ahịa site na ntọhapụ nke September 14 nke ọnwa Septemba chere na a dupụrụ ihe mkpuchi ahụ n'okpuru ụlọ ọrụ mgbasa ozi ijeri 80, na-ezipụ ndị na-ere ahịa n'ime oké iwe iji chọta ihe kachasị mma. Ọ karịala ọnwa abụọ ugbu a, anyị ka na-akpụchakwa isi anyị. Site na yigharị oge dị ezigbo mkpa ruo mgbe 2021, anyị dịka ụlọ ọrụ kwesịrị iji oge a rụọ ọrụ nke ọma iji chọpụta ọkwa ọla edo ọhụrụ maka
Ịgụ Oge: 5 nkeji Na oge dijitalụ a, agha maka ohere ịzụ ahịa agbanweela n'ịntanetị. Site na otutu ndi mmadu na ntaneti, ndenye aha na ire ahia esiwo na uzo ochie ha gaa na nke ohuru ha. Ebe nrụọrụ weebụ ga-adị na egwuregwu kachasị mma ha ma leba anya na atụmatụ saịtị na ahụmịhe onye ọrụ. N'ihi ya, ebe nrụọrụ weebụ abụrụla ihe dị mkpa maka ego ụlọ ọrụ. N'iburu ọnọdụ a, ọ dị mfe ịhụ etu njikarịcha ntụgharị mgbanwe, ma ọ bụ CRO dị ka amaara ya